ထပ်ခါထပ်ခါ သတင်းမှားတွေ ထွက်ပေါ်နေ တဲ့အပေါ် ပိုပို နဲ့ပါတ်သက် ပြီထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့ခဲ့တဲ့ မိသားစုဝင် တစ်ဦးရဲ့ ဖြေရှင်းချက်…. – Shwe Naung
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပိုပိုကတော့ သီချင်း အေးအေး လေးတွေကို ချိုသာတဲ့ အသံလေးနဲ့သီဆိုဖျော်ဖြေရင်း ပရိတ်သတ် အားပေးမှုကို အပြည့်ပ ဝရရှိခဲ့တဲ့သူ တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုတော် ပိုပိုက လတ်တလော မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထု နဲ့အတူသူ မတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအပြည့်အဝ တစ်သားတည် းရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့ သူလည်းဖြစ်ပါ တယ်နော်။
အခုလို မျိုးလူထု လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အတွက် ပုဒ်မ ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့် ဝရမ်းထုတ် ခံခဲ့ရပြီး သူမရဲ့နေ အိမ်မှာပဲ ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုပိုတစ်ယောက် ဖမ်းဆီးခံလိုက် ရတဲ့ အချိန်မှာ သူမကိုချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေဟာဆိုရင် အလွန်ပဲ ဝမ်းနည်းကြေကွဲ ခဲ့ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်.။
ဒီတစ်ခါမှာ ဆိုရင်လည်းအဆိုတော် ပိုပို ရဲ့သတင်းမှားတွေ မကြာခဏ တက်နေ ပေမဲ့ သူမဟာ အင်းစိန် ထောင်အတွင်း ကျန်းမာစွာရှိကြောင်း မနေ့ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ကိုယ်တိုင် ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့ခဲ့သူ မိသားစုဝင်က အခုလို ပြောပြခဲ့ ပါတယ်။
” ပိုပို ကျန်းမာရေး လည်းကောင်းတယ်၊ ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ တက် နေသလို ရူးလည်း မရူးသွား သလို၊ သေလည်း မသေပါဘူး ၊ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ပိုပို နဲ့ အတူ အခြား အနုပညာရှင် တွေလည်းရှိတော့ သူတို့အားလုံးလည်း ကျန်းမာရေး ကောင်းကြတယ်။
တခြား ထွေထွေ ထူးထူး ဘာမှ လုပ်စရာ မရှိတော့ စာအုပ်ဖတ်တယ်၊ ဘုရားတရားပို လုပ်ဖို့ အချိန်ရ တယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။ နောက် ပရိသတ် တွေကို လည်း အခြေမြစ် မရှိတဲ့ သတင်းအမှားတွေ အပေါ် မစိုးရိမ် ကြပါနဲ့ လို့လည်း ပြောချင်ပါတယ်” လို့ ပြောလာခဲ့ တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
ပိုပို တစ်ယောက် အမြန်ဆုံးပြန်လည် လွတ်မြောက်ပြီး ချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ အရင်လိုပဲ သီချင်းကောင်းလေးတွေ သီဆိုရင်းပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက် ချင်းစီတိုင်းကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ ထိုးသတ်ပွဲနဲ့ ပက်သတ်ပီး မိမိရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကို ပြောပြလာတဲ့ အိစိကွေး….
ဆိုင်းလုရဲ့ အိမ်ယာထက်က ကောက်ကြောင်း ပုံရိပ်လေးများ…….